कोरोना अन्त्यबारे WHO ले भर्खरै दियो सारा विश्वलाई खुशीको खबर ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > कोरोना अन्त्यबारे WHO ले भर्खरै दियो सारा विश्वलाई खुशीको खबर !
admin February 8, 2021 समाचार, स्वास्थ्य	0
काठमाडौ । कोरोना म’हा’मा’रीले मानव जाति पी’डित र भ’य’भी’त भइरहेका बेला विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले पहिलोपटक आशा जगाउने कुरा गरेको छ । विश्वभर कोरोनाबाट झन्डै साढे ७ लाख मानिसको मृ’त्यु तथा दुई करोडभन्दा बढी संक्रमित भइसकेको भए पनि डब्लुएचओले यो म’हा’मा’री अ’न्त्य हुने आशा अझै बाँकी रहेको जनाएको हो ।
डब्लुएचओले विश्वलाई पी’डित बनाइरहेको कोरोना म’हा’मा’री अ’न्त्यका लागि कडा कदम उठाउन अझै ढिला भइनसकेको बताएको छ । यसका प्रमुख डा। टेड्रोस एडहनम गिब्रेयससले एक पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘म स्पष्ट भन्न चाहन्छु कि अझै आशाको किरण बाँकी छ । यस म’हा’मा’रीको अ’न्त्य गर्न अझै ढिला भइसकेको छैन । **समाचारको पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
दीपाश्री निरौलाको रोकिएको त्यो विवाह (भिडियो)
दीपाश्री निरौलाले रोजै सामना गर्नुपर्ने प्रश्न हो– विवाह कहिले गर्नुहुन्छ ? उनी प्रायः हाँसेर टारिदिन्छिन् । उनले पहिला पहिला विवाह गर्ने चाहना भए पनि तत्काल विवाहका बारेमा सोच नबनाएको उनले बताइन् । आफू क्यारियर तिर फोकस्ड भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको बताइन् तर, मुहारमा मुस्कान देखिने यो क्षण दिमागमा भने एउटा पुरुषको तस्बिर नाच्ने गर्छ, जसलाई उनले ‘धोका’ दिएकी थिइन् । त्यो पनि विवाहकै दिन । यो अधुरो प्रेमकथा सुरु हुन्छ, विसं. २०४८ तिर । त्यतिबेला दीपा १० कक्षामा पढ्दै थिइन् । विराटनगरस्थित उनको घरअगाडि कलेज पढ्ने केटो भाडा लिएर बसेको थियो । पढाइमा नामी,आनीबानी पनि सरल ।
टेस्ट परीक्षा नजिक आउँदै थियो, दीपा उनीसँग पढ्न जान थालिन् । अरू साथीहरू पनि हुन्थे तर उनको ध्यान दीपातिर ज्यादा हुन्थ्यो । यसको हेक्का दीपालाई नभएको होइन तर थाहा नपाएझैं गरिन् । शंका लागेर हो वा कुन्नि, एक दिन आमाले किताब खानतलासी गरिछिन् । त्यहाँ त त्यही केटाले लेखेको प्रेमपत्र । दीपा मुस्कुराइन्, ‘मलाई थाहै थिएन तर आमाले पूरै बबन्डर मच्चाउनुभयो । आमा र फुपूको पिटाइ खाइयो ।’ उनी केटाले एकोहोरो मन पराएको विश्वास दिलाउन खोज्थिन् तर आमा मरिगए नपत्याउने । आमालाई डर रहेछ, छोरीले इसारा नदिई केटाले चिठी लेखेन,त्यसैले दिनरात गाली गरिरहिन्,कहिले रुँदै घुर्काउँथिन पनि ।